Fomba fanao tsara indrindra amin'ny marketing amin'ny mailaka: Inona ny atao hoe IP Warming? | Martech Zone
Alarobia, Martsa 25, 2020 Alakamisy 26 martsa 2020 Douglas Karr
Raha mandefa mailaka ana hetsiny ny orinasanao isaky ny mandefa dia azonao atao ny mizaka olana lehibe sasany amin'ny alàlan'ny mpanome tolotra internet amin'ny alàlan'ny alàlan'ny lahatahiry mailaka rehetra ao anaty folder junk. Matetika ny ESP dia manome toky fa mandefa mailaka ary miresaka momba ny avo indrindra aminy taham-panaterana, saingy tafiditra ao anatin'izany ny fandefasana mailaka ao anaty a lahatahiry fako. Raha te hahita ny anao famindrana inbox, mila mampiasa sehatra antoko fahatelo ianao toa ny mpiara-miasa aminay 250ok.
Ny mpizara rehetra izay mandefa mailaka dia manana adiresy IP mifandraika amin'izany, ary ny ISP dia mitazona lahatahiry amin'ireo adiresy IP ireo ary firy ny fitarainana momba ny tabataba sy ny spam azon'izy ireo avy amin'ireo mpampiasa azy amin'ny mailaka nalefa avy amin'ireo adiresy IP ireo. Tsy fahita firy amin'ireo ISP sasany ny mahazo fitarainana vitsivitsy ary avy hatrany dia alefa any amin'ny folder junk daholo ny mailaka rehetra fa tsy ny inbox.
Mifindra monina amin'ny mpanome tolotra mailaka vaovao
Na dia mety ho mpanjifa mailaka ara-dalàna 100% aza ny lisitry ny mpanjifanao izay nisafidy, na nisafidy indroa, ho an'ireo mailakao ara-barotra… ny fifindra-monina amin'ny mpamatsy serivisy mailaka vaovao ary ny fandefasana amin'ny lisitrao manontolo dia mety hanameloka azy ireo. Ny fitarainana vitsivitsy dia mety hampiakatra saina ny adiresy IP anao avy hatrany ary tsy hisy handray ny mailakao ao anaty boaty.
Amin'ny maha fanao tsara indrindra azy, rehefa mifindra any amin'ny mpanome tolotra mailaka vaovao ireo mpandefa be dia be, tokony hasiana adiresy IP nanafana. Izany hoe mitazona ny mpanome tolotra mailaka misy anao ianao ary mampitombo ny isan'ny hafatra alefanao amin'ny alàlan'ny serivisy vaovao… mandra-panaovanao laza ho an'io adiresy IP vaovao io. Rehefa mandeha ny fotoana dia afaka mifindra ny hafatrao rehetra ianao fa tsy te hanao izany amin'ny indray mandeha.
Marketing amin'ny mailaka: Inona ny atao hoe IP Warming?
Tahaka ny hafanana iray dia misy fitomboana miandalana amin'ny hamafin'ny asa ara-batana hampafana ny hozatra sy hampihenana ny lozam-pifamoivoizana, ny fiakaran'ny mari-pana IP dia dingan'ny fampidirana tsy tapaka ny volan'ny fampielezana isan-kerinandro ao amin'ny adiresy IP vaovao. Ny fanaovana izany dia hanampy amin'ny fametrahana laza tsara amin'ny Internet Providers (ISP).
Fanamafisana ny IP Smart: Ny dingana voalohany amin'ny famoahana ny mailaka
Ity infographic avy amin'ny Uplers ity dia mamaritra sy maneho ny fomba fanao tsara indrindra manafana ny adiresy IP anao miaraka amin'ny mpanome tolotra mailaka vaovao anao, mandalo anao amin'ireo dingana manan-danja 5:
Hamarino tsara fa manaraka ny fomba fanao tsara indrindra azo entina mailaka ianao alohan'ny handefasana ny mailaka voalohany ho an'ny fampisondrotana ny IP.
Ny IP natokanao dia tokony hanana rakitsoratra pointer natsangana ao amin'ny DNS anao (Domain Name System).
Ampizaro ireo mpamandrika mailaka mifototra amin'ny fifandraisan'izy ireo amin'ireo mailaka nataonao teo aloha.
Ny lakilen'ny fanamafisana ny fahombiazan'ny IP dia ny fampitomboana tsikelikely ny isan'ny mailaka alefanao.
Ataovy ny fidiovana aorian'ny fandefasana.
Nasongadin'izy ireo ihany koa ny faningana sasany miaraka amin'ireo Mpanome Tolotra Internet (ISPS) manokana:
Yahoo, AOL, ary Gmail dia manolotra olana marobe amin'ny alàlan'ny fizarana ny mailaka amin'ny bulatera misaraka, ka manemotra ny fandefasana mailaka. Hivaha izany raha vao mandefa mailaka misy metatra tsara ianao.
Ny fanemorana dia ara-dalàna ao amin'ny AOL, Microsoft, ary Comcast. Ireo fanemorana na fipoahana 421 ireo dia hanandrana mandritra ny 72 ora. Raha tsy afaka aterina aorian'io fotoana io dia hitsangana ho 5XX izy ireo ary ho voatahiry ho hadisoana 421 ny firaketana. Raha vao mivoatra ny lazanao dia tsy hisy fanemorana intsony.
Tags: AOLcomcastmpamatsy tolotra mailakaGmailmpamatsy serivisy amin'ny Internetmanafana ipISPbiraoserasera